Governemanta Iza no hodakana ?
Raha mbola anatiny tanteraka ny fihaonana an-tampon�ny Frank�f�nia dia ny mety hitranga aorian�ity andiany faha-16 ampiantranoan�i Madagasikara ity indray izao no be mpiresaka, indrindra eo amin�ny fitantanam-panjakana.
Vitan’i Madagasikara ny Frankôfônia saingy nisedrana ny firaisankinan’ny governemanta sy nitarafana ny anjara biriky nentin’ny minisitra mpikambana isanisany amin’ny fahombiazana na tsy fahatomombanan’ity fihaonambe ity ihany koa. Iza no nanao mosalahy ? Iza no tena nifofotra ? Iza no manabe tarehy hohitan’ny fakan-tsarin’ny mpanao gazety fotsiny ? Raha izao fizotrany izao anefa dia tsy azo ihodivirana ny fanovana ny mpikambana ao anatin’io governemanta io, na ho noho ny antony ara-pahasalamana fotsiny aza, ka tsy ahafahan’ny minisitra sasany mandray an-tanana 100% ny fampandehanana ny departemanta tantaniny. Ny sahanasa tononina isaky ny misy filankevitry ny governemanta sy ambaran’ny mpitondra any ampitetezam-paritra any anefa toa misimisy ihany. Toerana politika rahateo ny toerana minisitra ka tsy hatao mahagaga raha hisy ny hisaorana ka hosoloina. Ny fahitana ireo fikambanana niforomporona sy nanao fanambarana tao ho ao ihany koa toa manao pi-maso sy fihetsika miandrandra toerana ao anaty governemanta. Iza no minisitra hoesorina ? Hiandry amin’ny 2017 sa ho alohan’ny faran’ny taona ?